Maalqaabeen Israa’iil u dhashay oo lagu soo dacweeyey fadeexad Laaluush | Hubsad News
Maalqaabeen Israa’iil u dhashay oo lagu soo dacweeyey fadeexad Laaluush
August 14, 2019 - Written by weryayaasha shabakada hubsad
aalqabeen Israa’iil u dhashay oo lagu magacaabo Beny Steinmetz iyo laba xubnood oo ay shirko yihiin ayaa maxkamad la soo taagayaa kaddib marki lagu soo eedeeyey iney laaluush siiyeen madaxda dalka Guinea si ay tartanka macdinta ugu guuleystaan, ayuu yiri Xeer-ilaaliyaha Swiss.
Waxaana xubnahan lagu soo eedeeyey iney £10 milyan oo doolar oo laaluush ah ay siiyeen xaaska madaxweynihi hore ee dalka Guinea Lansana Conte.
Mr Steinmetz iyo shirkaddiisa macdinta soo saarto ee Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) ayaa marki ugu horreysayba diiday eedda loo soo jeediyey iyaga oo sheegay iney wax khalad ah sameeyeen.
Hase yeeshee, Xeer-ilaliyaha ayaa doonaya xubnahaasi in kiiska lagu qaado laguna xukumo 10 sano xarig ah.
Xeer-ilaaliyaha oo kiiskan baaritaankiisa lix sana ka hor billaabay, ayaa sheegay inuu Mr Steinmetz uu xuquuqda macdinta uu kaga baarayo deegaanka Simandou ee Koonfurta-Bari ee dalka Guinea uu helay 2008-dii inta uusan dhiman Conte.
Wuxuu dacwaddiisa uu ku sheegay in lacagta si gaar ah loo siiyey xaaska madaxweynihi hore loogana shubay akaawunka bangiga Swiss. Bishi February ee sanadkan ayey ahayd marka ay Guinea diiday Mr Steinmetz dacwadda ka dhanka ah ee musuqmaasuqa la xiriira.
Xukumadda Guinea ayaa sheegtay iney ka qayb qaadan baaritaanka ay dowladda Swiss sheegtay iney sameysay ayna u baahneen iney afduub ku sameeyaan shirkadda BSGR, uu malqabeenka Israa’iil leeyahay.
2016-kii ayey ahayd marki Mr Steinmetz ay xireen booliska Israa’iil ayna weydiiyeen su’aalo la xiriira heshiiska macdin baridda. Balse xilligaa waxaa uu Mr Steinmetz diiday inuu wax khalad ah uu sameeyey.
Simandou ayaa waxay ka mid tahay deegaannada caalamka ugu weyn oo laga helo Keydka birta, iyo balaayiin tan oo macdinta tayadeedu aadka u sarreysa ee Ore.
Kheyraadka macdinta ee dalka Guinea ayaa ka dhigaya waddamada qaaradda Afrika ugu qanisan dhinaca macdinta, inkasta oo ay muwaaddiniin dalkaasi intooda badan ay ku nool yihiin dakhli ka yar $1 doolar wax yar maalinkii.